Hirirri Mormii Maastar Pilaanii TBOJ Caayaa ABO fi Hawaassa Oromoon Barliin | OromianEconomist
Hirirri Mormii Maastar Pilaanii TBOJ Caayaa ABO fi Hawaassa Oromoon Barliin	November 17, 2015
Tags: Hirirri Mormii Maastar Pilaanii TBOJ Caayaa ABO fi Hawaassa Oromoon Barliin, Master Plan is Master Killer, Oromo Diaspora, Oromo Protests
Hirirri Mormii Maastar Pilaanii TBOJ Caayaa ABO fi Hawaassa Oromoon Barliin Kessatii Gaffaa Sadaasa 13, 2015 Gageffamee
Gaaffiin Oromoo Gaaffii Abbaa Biyyuummaa ti.
– Tokkuumma Baratoota Oromoo Jarmanii (TBOJ)
Akkumma bekkamuu Uummanni Oromoo bittaa fi dhittaa motootaa Habashaa fi motuummaa abbaa irree jalatti kufuun jaarraa heedduu lakkofsisuun, mirgaa isaa otoo falmaatuu yoona akka gahee ni hubataamaa.
Haata’uu maalee mootumootaa abbaa irree jalaattis kufuu Uummanni kun guyyaa tokkoo illee ykn yeroo tokko illee mirgaa isaa falmaachuu, waa’ee isaa dubachuu irraa dubaatti yeroo inni debi’ee tokko ille hin jiruu, yeroo amma kanatti immoo FDG fi Qabsoon ABO daraan jabachaa dhufuun motuumman biyyaa biitaa jiruu Uummaata Oromoo irratti kalaatti adda addaan duulaa banee akka jiruu nii beekamaa. Kanaafu Uummaata keenyaa biyyaa kessaaf sagalee tahuun Sadaasa 13, 2015 mormiin magaala Barliin, Jarmaanitti gaggeffame milkiin xumuramee.
Mormii hirirraa kana irratti namootaa heduun irra qodaa kan fudhataan yeroo tahuu, kessumaa dhalonii qubee heduminnan kan argamanii fi gara fulduratiis qabsoon keenyaa daraan akka jabatuu fi bilisummaan keenyaa gonfanuuf hundumtuu gahee mataa mataa isaa bahachuu akka qabuu dhamsii waalii galaa dabree jiraa.
Mormiin hirirra kun eddo fi bakka barbachisoo tahaan hundaa kan demamee fi iyyannon xalayyan kan galfamee yerroo tahuu, dhimmaa mormii motumaa abba irree halaan balaleffachaa olamee jirra.
Qabsoon Uummataa bal’aa Oromoo degartoota kayyoo fi dandii siyasaa ABOtti warrii amman dhabileen adda addaa heduminaan irra qoodaa fudhataaan jiruu.
Dhadanolee fi ejjennon TBOJ caayaa ABO fi hawassaa qabsoo bilisumma Oromoo degaraan,
Heerrii fi seerri Oromoof hin hojjenne, Oromoorattis hojjechuu hin qabu.
Maastar Pilaanii Finfinne hangaa Oromoon lafaa irraa jirutti hojji irra oluu hin qabu.
Ajjeecha fi sanyii dugugga icittiin Oromoota irratti gageeffama jiruu hatataaman dhabachuu qaba.
Hidhaa siyassaan mana hidhaa kessatti gidirfamaa jiran gadhifamuu qabu.
Saamichi lafaa fi toftaalee adda addaan qe’ee irraa buqiifaamaa jiraan dhabachuu qabaa.
Sarbamuu mirgaa namummaa fi reebichaa garaa jabinaan irraa gaha jiruu dhabachuu qaba .
Akkasumaas rakkolee adda addaa Saba keenyaa irraan otoo waal irraa hin citiin gahaa jiruu kun dhabachuu qaba.
Itti dabalataan baatiin Sadaasa qabsa’otaafi saboontotaa Oromoo biratti baatii adda tahee dha, kanaafuu Fincilaa Diddaa Gabruumma (FDG) kan biyyaa jarmaan bara 2015 mormii hiriiraa waaliin waal qabsisuun qabsa’otaa keenyaa wareegamaan yadatamee oleraa.